Iisucculents zizityalo ezigcina amanzi. Ikhutshiwe kwigama lesiLatin ijusi , oko kuthetha ukuba incindi okanye incindi, ezi zityalo zihlala zithathwa njengezinganyangekiyo kwimbalela. Eli qela lezityalo ezahlukeneyo liyathandwa kwigadi yasekhaya kwaye ngokubanzi ayifuni sixa sikhulu solondolozo. Ngenxa yolondolozo olusezantsi, iisucculents zithandwa njengezindlu kuzo zonke iindawo eUnited States.
Iisucculents zihlala zibonakaliswa ziinxalenye ezinobunzima, zerabha, okanye ezinamanzi. Nangona kunjalo, kukho izinto ezininzi onokukhetha kuzo kwaye ezi zityalo ziza kuluhlu lweemilo, ubukhulu, imibala, kunye nemibala. Iisucculents zihlala zaziwa ngokubonakala kwazo okungaqhelekanga okanye okungaqhelekanga.
IiSucculents zihlala zihonjiswe ngamagqabi ashinyeneyo, iziqu, okanye iingcambu. Iindawo ezinobuninzi besityalo zisetyenziselwa ukugcina amanzi. Ezi zityalo ziqhelekile kwiindawo ezinamaqondo obushushu aphezulu kunye nemvula encinci. Banokugcina amanzi ukuze baphile ixesha elide ngaphandle kokufuma okuncinci. Bomthonyama kwiindawo ezinjengentlango okanye i-steppes, ezi zityalo zihlala zibonakala zidumbile xa kugcinwa amanzi.
Abomdabu kwimimandla eyomileyo, iisucculents azinakuphila kumaqondo obushushu aqandayo. Ngelixa ezinye zihlala ixesha elifutshane, ezi zityalo ziya kukhula kumaqondo obushushu afudumeleyo. Zihlala ziphawulwa ngamagqabi amile okweenaliti okanye amile okwe rosette.
Iisucculents nazo aziqhelekanga kuba zisasazeka ngokulula. Ngamaxesha athile, isityalo esitsha siya kukhula nakwiqhekeza leqabunga.
Njengabagcini bamanzi, ezi zityalo ziya kufa ukuba ziyekwe emanzini amaninzi.
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-metamucil ixesha elide
Iindidi zesucculents bubungqina obuyinyani ngokwahluka komhlaba wezityalo. Ukusuka kwindawo exotic ukuya kwindawo eqhelekileyo, ezi zityalo zinokuba zezisisiseko okanye zomelele. ICacti yenye yezona zishushu zaziwayo. Nangona kunjalo, i-botanists zihlala zibhekisa kwi-cacti njengolwahlulo olwahlukileyo.
Amakhaya kunye neeGadi ezingcono icebisa ezi zilishumi zinencasa yegadi yasekhaya:
Ezinye izityalo eziqhelekileyo ezinamanzi zibandakanya:
Umthi ofana ne-Euphorbia
Olu luhlu alunakuncipha umphezulu. Jonga amantshontsho.net uluhlu olubanzi.
Kutheni kulula ukuba zikhule
Kwiminyaka yakutshanje, ii-succulents zikhule ngokuthandwa njengezityalo zendlu kunye nasegadini. Ezi zityalo zifanelekile kubalimi abangenalo ulwazi olunzulu lwezenzo zokuphucula izitiya. Nazi ezinye zezizathu zokuba izityalo ezingaqhelekanga kulula ukuzinyamekela:
Njengengxenye yendalo yabo engaqhelekanga, ezi zityalo ziyabetha kwaye ziyathandeka.
Iisucculents zifuna ukunkcenkceshela okuncinci okanye ukuthena.
Kulula ukuthutha ukusuka kwimimandla yabo yemveli ngenxa yolondolozo oluphantsi.
Kulula ukuqulatha, ezi zityalo zingabekwa kwiimbiza ezincinci kwaye zibekwe phantse naphina.
Inkoliso yezinambuzane ayitsaleleki kwiziselo ezinetyhefu.
Iisucculents zingatyalwa zodwa okanye phakathi kwezinye izityalo.
Iindidi ezininzi zeesucculents azibizi.
Abanye, njenge-aloe, banokusebenzisa enye indlela okanye amayeza.
Iisucculents zenza izityalo ezinkulu zekhaya okanye ukongeza kwigadi yakho kwaye azidingi kuhoywa. Jonga eyethu iingcebiso malunga nokukhula nokunyamekela iisucculents .
Ityala lemifanekiso: UKelly Dobbs Henthorne
ingakanani ipotassium kwimbona
yintoni i-potassium citrate
I-opana 40 mg ipilisi
Ngaba kulungile ukusela kwii-antibiotics
ukugqwesa ifomula yeentsuku zeshishini